Suurtagal ma tahay in la isticmaalo iPhone la xaday? | Waxaan ka socdaa mac
Suurtagal ma tahay in la isticmaalo iPhone la xaday?
Nasiib darrose, dhammaanteen inta jidhkeennu ku dhibaatooday xatooyada a iPhone waxaan isweydiinay isla su'aashaas. Dib ma u isticmaali kartaa a iPhone qufulan iCloud?
Haddii waligaa iPhone lagaa xaday, waxaad u maleyneysaa inaad la yaabtay haddii qof runtii awood u yeelan doono inuu mar kale isticmaalo
Waa run inay iyaga u xadaan adiga iPhone Waa inaad mid uun haysataa, nasiib darrose dad badan ayaa maalin walba la silca taleefannadooda casriga ah. Maalmahan, waayitaanka taleefankeennu maahan oo keliya shaqo darteed luminta qalabka elektaroonigga ah laftiisa, iyadoon loo eegin qiimaha dhaqaale ee ay leedahay ama xaaladda jireed ee ay ku jirto. Luminta xogta ay ka kooban yihiin ayaa aad uga badan, iyo wixii ka sarreeya sababta oo ah waxa gabi ahaanba lagama maarmaanka noo ah shaqadeenna maalinlaha ah. Taleefanka gacanta ee casriga ah ee qof walba u adeegsado qaab caadi ah maalin kasta, wuxuu ka koobnaan karaa faahfaahinta bangiga, cinwaanada shaqsiyeed, sawirro leh qiime shucuur leh, ama xitaa xog u liidata milkiilaha isla ama dhinacyada saddexaad.
Sida laga soo xigtay Xoghayaha Amniga ee Mareykanka, intii lagu guda jiray 2014 (ma hayno xog sanadka 2015) in ka badan 279.000 cabasho ayaa loo gudbiyay xatooyada mobilada, taas oo u dhiganta Xatooyo mobilo ah labadii daqiiqaba mar !! Lambarradan qaboojinta ah, nuqullada nuqulada ah ee marwalba lagu taliyo ee xogteenu macno badan ayey sameynayaan. Way cadahay in kuwa nasiibka u helay in aysan shaqsiyan la kulmin xatooyada taleefanadooda casriga ah, ay yaqaanaan dhowr qof oo ay ku dhacday. Sanadihii la soo dhaafay, dhammaan shirkadaha soo saaraya taleefannada casriga ahi waxay u hibeeyeen qayb weyn oo ka mid ah kheyraadkooda si ay qalabkooda uga dhigaan kuwa ugu ammaan badan intii suurtogal ah, laakiin ma kula tahay in taas lagu guuleystay?
Isticmaalayaasha iPhone, xoogaa waan ka neefsanaa tan iyo markii la bilaabay macruufka 7, nuqul kaas oo ah in la joojiyo codsiga '' Raadi iPhone-kayga '', waxaa horay naloo waydiiyay inaan ku galno faahfaahinta koontadayada. Aqoonsiga Apple, iyo kaayaga iPhone gabi ahaanba lama wada geli karin, iyo in haddii aan la helin, xumaan yar, tuuggu weligiis ma isticmaali karo. Laakiin waxay leedahay xatooyo of iPhone? Nasiib daro Maya. Tanina waa marka aan isweydiineyno, ma jirtaa wax suuragal ah in qofkii xaday taleefankayga uu mar kale isticmaali karo isagoon haysan ID-kayga Apple? Tricless "tricks" ayaa ka socda webka si loo furo iPhone ama Ipadka, laakiin midkoodna lama xaqiijin.
In ka yar sanad ka hor waxaan ogaanay qaab khiyaano ah oo ka kooban in SMS loo diro taleefanka oo aan ku muujin karno shaashadda si ay noo soo sheegaan haddii iPhone la xaday la talin in a iPhone (Waxaa sidoo kale loo adeegsaday iPad-ka), iyo si aad uhesho waa inaad isku aqoonsataa aqoonsigayaga Apple-ka ee ku xirma marin u helka iCloud. ICloud ayaa la filayay in la helay, iyo iyadoo la geliyay xogteenna bogga la iska dhigay, iyada oo loo marayo waxa loogu yeero phishing, tuugada ayaa helay aqoonsigeenna iyo lambarka sirta ah si ay u furaan taleefanka oo ay u isticmaali karaan ama u iibin karaan. Lumay weligiis.
Si kastaba ha noqotee, maalinta aan luminno ama tayada iPhoneIn kasta oo sawirro lagu haysto qulqulka iyo nuqulada nuqullada ajandayaasha iyo xogta ku jirta iTunes qayb ahaan loo yareeyo xanuunka, haddana waxba ma saaraan xanaaqa weyn ee ay leedahay. Xitaa iyada oo la adeegsanayo sirta cusub iyo nidaamyada amniga meesha ma caawin karno laakiin lama yaabin, ma awoodi doonaan inay isticmaalaan tayda iPhone Mise hadday awoodi waayaan inay isticmaalaan, macno mala samaynayaa hadda in la xado a iPhone?.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » iPhone » Suurtagal ma tahay in la isticmaalo iPhone la xaday?
Waxaan qiyaasayaa in qof kasta oo Iphone X ka xaday, uu ku dambayn doono inuu ku iibiyo xoogaa shilimaad ah, guryaha u heellan hagaajinta taleefannada.
Qalabka AirPort wuxuu ku laabanayaa Apple Store
Noloshu waa mid qariib ah, tacabirka garaafka ee ku saleysan safarka waqtiga wuxuu yimaadaa Mac